ဆေးလိပ် နှင့် စိတ်အခြေအနေ - Winkabar
ဆေးလိပ်မသောက်ဖို့ရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးတွေ ဖတ်ရတာ ဆေးပညာဗဟုသုတရလို့ ကျေးဇူးပါ ညီမလေးရေ...
အမက ဆေးလိပ်နံ့လုံးဝ ခံလို့ မရဘူး။ ဆေးလိပ်နံ့ရရင် အသက်ရှုကျပ်နေရော.. အဲဒီနေ့ နေလို့ မကောင်းတော့ဘူး.. သောက်များသောက်ရင်တော့ အသက်ပါ ထွက်မယ်.. ဂျပန်မှာတော့ အမျိုးသမီးတွေက လက်က စီးကရက်ကို မချဘူး.. အသားကုန် သောက်ပဲ.. :)
Posted on:November 26, 2007 at 10:27 PM Delete This Comment
အင်း.. ဒီဆေးလိပ်မသောက်ဖို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို.. ကိုယ်လည်း ထောက်ခံပါတယ်။ တချိန်မှာ ကိုယ်တို့ ကမ္ဘာကြီးက ဆေးလိပ်ကင်စင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်လာပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
Posted on:November 27, 2007 at 1:48 AM Delete This Comment
မျှဝေ တဲ့ စိတ်လေးရှိတာ
Posted on:November 27, 2007 at 5:11 AM Delete This Comment
တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် said:
ဆေးလိပ်ဆိုလို့ နဲနဲဝင်ပြီး ပြောကြည့်ချင်တယ်။ တာတူးက ဆေးလိပ် မကောင်းတာလည်း သိတယ်။ သောက်လည်းမသောက်ပါ။ ခက်တာက တာတူးဝန်းကျင်က လူတွေက ဆေးလိပ်ဂျိုး (ဆေးလိပ်စွဲနေကြသူ) တွေချည်း။ သူတို့က မနက်ဆို မျက်လုံး မဖွင့်ခင် ပါးစပ်မှာ ဆေးလိပ်အရင် တပ်လိုက်ရမှ။ တွေ့ဘူးကြမယ်ထင်ပါရဲ့ ။ တာတူးပြောလေ့ရှိတဲ့စကားဝေမျှရရင် မင်းတို့က ဆေးလိပ်ကို အစီခံနဲ့ သောက်ကြတာ ငါက ဗြောင်သောက်ရတာလို့ ။ပြီးတော့ နင်တို့က တစ်ယောက်မှ တစ်လိပ်ရယ် ၊ ငါက တစ်နေ့ တစ်နေ့ မနည်းဘူးလို့ ။
ဒီလိုနဲ့ တာတူးက အဆုတ်ရောဂါ ရပါတယ်။ ခုဆို ဆေးလိပ်ငွေ့ တို့ ၊ မီးခိုးငွေ့တို့ မခံနိုင်တော့ပါ။
ကောင်မလေးက ဖြတ်ခိုင်းလို့ ပြတ်သွားတဲ့ လူလည်း တွေ့ဘူးရဲ့ ။
အသဲကွဲလို့  ၊ လွမ်းလို့ ဆေးလိပ်စွဲသူလည်း ကြုံဘူးရဲ့ ။
စီးကရက်လေး ပါးစပ်မှာ ခဲနိုင်ရင်ကို ဂုဏ်ရြှိပီထင်ထင်နေကြသူတွေလည်း ကြုံးဘူးရဲ့ ။ ဝေမျှချင်တာကတော့ ရထားပေါ် ၊ ကားပေါ် ၊ သင်္ဘောပေါ် လူများများရှိတဲ့နေရာမှာ ဆေးလိပ် သောက်ကြသော ပုဂွိုလ်များကို တားမြစ်ကန့်ကွက်ပေးကြပါလို့ ။
Posted on:November 27, 2007 at 11:47 AM Delete This Comment
ကျနော်က အသက် ၁၇ နှစ်သားမှာ ဆေးလိပ် စသောက်ခဲ့တယ်။ စ သောက်တုန်းကတော့ လူငယ်သဘာဝ သူငယ်ချင်းတွေ မြှောက်ပေးမှုနဲ့ ဖွာထုတ်တာပါပဲ။ မှတ်မိသေးတယ်၊ အဲဒီတုန်းက ဆေးလိပ်မီးခိုးကို နှာခေါင်းထဲကနေ မျှင်းပြီး ထုတ်နိုင်တာ၊ သူများတွေက မီးခိုးတွေကို ဖွာထုတ်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်က ရှိုက်သွင်းတာကို ကြံကြံဖန်ဖန် ဂုဏ်ယူခဲ့ဖူးတယ်။ နောက်တော့ ပိုက်ဆံလေး တတ်နိုင်ရင် စီးကရက်၊ မတတ်နိုင်တဲ့ အခါဆိုရင်တော့ ဆေးပေါ့လိပ်ပေါ့။ ဘယ်လောက်အထိ သောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင် တနေ့ကို လန်ဒန် တဗူးကို ကျနော်တယောက်ထဲ ကုန်တယ်။ တခါတလေဆို မလောက်ဘူး။ ဆေးပေါ့လိပ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး ဆယ့်နှစ်လိပ် ကုန်တယ်။
အဲလောက် ဆေးလိပ်သောက်ခဲ့တဲ့ လူက တချိန်မှာတော့ ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ် လုံးဝ ကုန်ခန်းသွားခဲ့တယ်။ ကျန်းမာရေး အသိကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးလိပ် သိပ်သောက်ချင်လွန်းတဲ့ အခါကျတော့ ပိုက်ဆံ မရှိတဲ့ အခိုက်ဆိုရင် သိပ်မျက်နှာငယ်ရတယ်။ သူများ သောက်လက်စ အတိုကိုလည်း မျှသောက်လို သောက်ရ၊ တခါတလေဆို ကိုယ်နဲ့ သိပ်အဆင်မပြေတဲ့ လူကိုတောင် (ဆေးလိပ်မျက်နှာနဲ့) မျက်နှာချို သွေးချင်သွေးရသေးတယ်။
အခုတော့ ဆေးလိပ် ပြတ်ခဲ့တာ လေးနှစ်လောက် ရှိပါပြီ။ အခုကျတော့လည်း တခြားလူက ကိုယ့်အနား လာသောက်ရင်တောင် အနံ့မခံနိုင်တော့ဘူး။
လေကြောရှည်တာ များသွားလို့ မျက်စိနောက်စရာ ဖြစ်သွားရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ဗျို့။ ပြောချင်တာကတော့ ဆေးလိပ်သောက်တာ မကောင်းဘူးဆိုတာကို ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာပါပဲ။ :D
Posted on:November 27, 2007 at 6:31 PM Delete This Comment
ဟုတ်တယ်ဗျာ နော် ဆေးလိပ်က မကောင်းဘူး .။
ဒါပေမယ့် ...။ :)
Posted on:November 27, 2007 at 7:22 PM Delete This Comment
ဒီနေ့ ပန်းသီးတွေဝယ်လာတယ်။ ညီမလေးpost ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ပဲသောက်ဖြစ်ပြီး ပန်းသီး ၃ လုံးစားလိုက်တယ်
Posted on:November 27, 2007 at 10:17 PM Delete This Comment
nu san>>ဟုတ်ပါ့အစ်မရယ် ကိုယ်တိုင်သောက်ရင်တော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး။ဒီကလူတွေလည်းဒီလိုပဲ။ သောက်သလားတော့မပြောနဲ့။ အပြင်တောင်မထွက်ရဲဘူး။ အသက်အောင့်ပြီးမြန်မြန်ပြေး
မိုးချစ်သူ >>အစ်မ ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ။
တာတူး>> အခြေအနေပေးရင်တော့လုပ်ချင်ပါတယ်။ commentရေးသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ကလိုစေးထူး>> အစ်ကို့အတွေ့အကြုံကထူးထူးဆန်းဆန်းပါလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်သွားတာဝမ်းသာပါတယ်။ ကိစ္စမရှိပါဘူးရှည်လည်း။ ဖြည့်စွက်ပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစေးထူးရေ။
မျှားပြာ>> အဲဒီဒါပေမယ့်တွေက ခက်နေတာပေါ့ကိုမျှားပြာရယ်။
မင်းတစေ>> အစ်ကိုရေ ၀မ်းလည်းသာတယ် ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်နော်။ အောင်မြင်ပါစေ။
Posted on:November 28, 2007 at 3:38 PM Delete This Comment
အမလည်း ဆေးလိပ်အနံ့ မခံနိုင်ဘူး။ ဆေးလိပ်အနံ့ရရင် ခေါင်းတွေကိုက်၊ လည်ချောင်းယားပြီး အသက်ရှူမဝဘူး။ မှတ်မိသေးတယ်။ ဆေးခန်းမှာ အလုပ်ဝင်တုန်းက အမတို့ ကောင်တာရှေ့ လူနာစောင့် ခုံတန်းမှာ လူကြီးတစ်ယောက် ဆေးလိပ်သောက်နေလို့။ ဘယ်သူကမှလည်း ထွက်မပြော၊ နံလိုက်တာလို့ဘဲ အထဲမှာကြိတ်ပြောနေကြတာ။ အမတော့ သည်းမခံနိုင်တာနဲ့ ဆေးခန်းထဲ ဆေးလိပ်မသောက်ဖို့ ထပြောပလိုက်တယ်။ ဒီမှာတော့ မိန်းကလေး 90% ဆေးလိပ်သောက်ကြတယ်။ ကိုယ့်အခန်းထဲ ဆေးလိပ်မီးခိုး ဝင်လာရင် အရမ်းစိတ်တိုရတယ်။ :((
Posted on:November 29, 2007 at 7:31 PM Delete This Comment
ဆေးလိပ်ကင်းစင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို အရောက်သွားဖို့ တို့ ကတော့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီနော်.... :)
Posted on:November 30, 2007 at 3:49 AM Delete This Comment
အစ်မလည်း ဆေးလိပ်နံ့ မခံနိုင်ဘူး..။ ဒါကြောင့် လက်တွဲဖော်ရွေးတဲ့အခါ ...ဆေးလိပ်သောက်သူမဖြစ်ရလို့ ကန့်သတ်ခဲ့တယ်..။ ဟိ..ကြုံတုန်း လေး...။
Posted on:November 30, 2007 at 12:18 PM Delete This Comment
metta campaign said:
လုံးဝ မတည့်ပါ။ ဒါပေမယ့် သောက်ဖြစ်နေတယ်။ အသေစောမယ့်သဘောပဲလို့ ယူဆမိပါရဲ့ဗျာ။
Posted on:December 1, 2007 at 12:17 PM Delete This Comment
မင်္ဂလာပါ. ၈ တန်းထဲက ဆေးလိပ်ကို စသောက်ခဲ့ပြီး ၉ နှစ်လုံး တစ်ခါမှ မပြတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကျွန်တော် အခုဖြတ်ထားတာ ၄ ရက်ရှိပါပြီ. ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူလိုက်ဖြတ် ကြရအောင်. မင်္ဂလာပါ ၀င်္ကပါ.
Posted on:December 2, 2007 at 12:22 AM Delete This Comment
nu-sanPosted: November 26, 2007 at 10:27 PM
AnonymousPosted: November 27, 2007 at 1:48 AM
မိုးချစ်သူPosted: November 27, 2007 at 5:11 AM
တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက်Posted: November 27, 2007 at 11:47 AM
ကလိုစေးထူးPosted: November 27, 2007 at 6:31 PM
မျှားပြာPosted: November 27, 2007 at 7:22 PM
MintasayPosted: November 27, 2007 at 10:17 PM
WinkabarPosted: November 28, 2007 at 3:38 PM
မြရွက်ဝေPosted: November 29, 2007 at 7:31 PM
MoesatPosted: November 30, 2007 at 3:49 AM
LaymaPosted: November 30, 2007 at 12:18 PM
metta campaignPosted: December 1, 2007 at 12:17 PM
natshinnaungPosted: December 2, 2007 at 12:22 AM